Kumannaan dil ka badbaaday Iran kadib sharci wax laga badalay. – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Kumannaan dil ka badbaaday Iran kadib sharci wax laga badalay.
Kumanaan qof oo horey loogu heley dacwado la xiriira isticmaalka ama ka ganacsiga daroogada ayaa lagu soo waramayaa in ay ka badbaadayaan in lagu fuliyo xukun dil ah kadib markii la badalay qodobo ka mid ah sharci horey u jirey oo ay ku muteysteen dil.
Illaa 5,000 dambiilayaal xabsiyada ku jira oo sugaya in xukunka dilka lagu fuliyo ayaa ka faa’iideysan kara isbadalkan, balse waxaa xukunka loogu badalayaa muddo xabsi oo aanan wali la shaacinin.
Sanad kasta Iran waxa ay dil ku fulisaa boqolaal qof oo intooda badan lagu heley dambiyo la xiriira daroogada.
Sharciga oo horey u ahaa in qofkii lagu helo 30kg oo daroogo ah uu dil ku muteysanayo, ayaa hadda la kordhiyay garaamka uu qofka ku muteysanayo dilka, waxaana la gaarsiiyay illaa 50 kiilo kadib dib u eegis uu sameeyay baarlamaanka.
Madaxa garsoorka Iran Ayotollah Sadeg Larijani ayaa sheegay in dadka dilka ka badbaadaya xabsi loogu badalayo.
Balse waxaa cabsi laga qabaa in dadka qaarkood oo dil ku xukumay aysan ka faa’iidaysan karin sharcigan maadaamaa ay kasoo jeedaan qoysas faqri ah oo aanan heli karin waxa ay u baahanyihiin si dambiga looga qafiifiyo.
Hay’ada xuquuqda aadanaha ee Amnesty ayaa iyada oo soo xiganaysa saraakiil reer Iran ah sheegtay in illaa sanadkii 1998-dii dil lagu fuliyay dad gaaraya 10,000 qof dambiyo la xiriira daroogo.
← Madaxweyne Farmaajo oo masaafo dheer oo dhulka ah ku safraya.
Salaries body digs in over lower pay for MPS as court row rages →